Torino di Sangro, Abruzzo, Italy
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguGino
La Collinetta sul Mare, ikhaya leeholide.
Isakhiwo simi kanye phezu kwenduli, ukuphakama ngokwaneleyo ukuba ube nendawo yokuqwalasela elwandle, enokufikelelwa ngamanyathelo ambalwa, kodwa nakwintaba ekhazimlayo yaseMajella, eyesibini ukuphakama kwii-Apennines ezinokufikelelwa ngokuncinci. ngaphezu kweyure ngemoto.
Ukusuka apha, ubumfihlo buqinisekiswa ngocingo olunodonga oluphakamileyo kunye nesango lentsimbi elivaliweyo.
Indlu inomyezo ojongene nommandla oluhlaza wendalo ongezantsi apho, ngakumbi kwiinyanga zasentwasahlobo nasekwindla, kodwa nakwiiyure zasekuseni ehlotyeni, unokuva iingoma zeentlobo ezininzi zeentaka.
Iveranda eneefestile ezityibilikayo ikuvumela ukuba ufunde incwadi elungileyo okanye usebenze kwikhompyuter nge-wi.fi engenamkhawulo kunye nesimahla, nokuba kukho imvula nomoya. I-terrace kwicala elingasezantsi lendlu ixhotyiswe nge-barbecue enokukhanya okugqibeleleyo kunye ne-awning, kumnandi ukunandipha ukutshona kwelanga kwi-Majella ekufutshane.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1
Indawo ekungena umntu wonke
Ukubuka amasimi eediliya
Bonisa zonke 21 izinto onokuzisebenzisa
Le ndawo ithule kakhulu inezindlu ezimbalwa, ukusuka endulini yonwabela ukuzola okuhle, ukufunda, ukumamela umculo okanye ukusefa kwi-intanethi.
Umbuki zindwendwe ngu- Gino
Ujoyine nge- 2018 Februwari
Ngokuqhelekileyo, umntu ovela kwintsapho yethu uhlala ekhona.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 16:00 - 21:00